Fifidianana solombavambahoaka “Tsy ho tratra ny 20 martsa”, hoy i Thierry Rakotonarivo
Ny 16 desambra lasa teo no nandroso volavolana tetiandrom-pifidianana tany amin`ny governemanta ny vaomiera misahana ny fikarakarana fifidianana (CENI) izay namaritra fa ny 20 martsa ho avy izao ny fanatanterahana fifidianana solombavambahoaka.
Tsy ho tratra ny hanaovana ny fifidianana amin`ilay daty voatondro, hoy i Thierry Rakotonarivo filoha lefitry ny CENI, satria tsy maintsy havoaka ny didim-panjakana miantso ireo mpifidy hanefa ny adidiny 90 andro mialoha ny hanatontosana ny fifidianana. Ny 20 desambra 2018 no tokony ho nivoaka ny didy fampiantsoana ataon`ny governemanta. 74 andro ny fe-potoana ilain`ny CENI hahafahana mikarakara ny fifidianana solombavambahoaka, hoy ihany izy. Nahatontosa ny adidiny ny teo anivon` ny CENI kanefa tsy tratra intsony ny fe-potoana. Ny 5 febroary no hifarana ny fe-potoana hiasan`ny depiote etsy Tsimbazaza ka mety hisy ny fahabangana amin`ny andrim-panjakana (vide institutionnel). Tsy ho tratra ny hisian`ny Antenimieram-pirenena vaovao hivory voalohany amin`ny talata voalohany amin`ny volana mey ho avy izao, izay fivoriana ara-potoana voalohany amin`ity taona 2019 ity. Nampatsiahy kosa ity vaomieram-pirenena ity fa efa nanomboka ny 1 desambra lasa teo ny fisokafan`ny lisi-pifidianana izay tafiditra ao anatin`ilay fanavaozana ny lisi-pifidianana eto Madagasikara ka hifarana ny 15 febroary ho avy izao ny fandraisana ny anarany ary hofaranana vonjimaika ny faran`ny volana febroary ihany. Manaitra sy manainga ny rehetra i Thierry Rakotonarivo mba handray ny andraikiny ny olo-pirenena tsirairay amin`ny fanavaozana lisi-pifidianana satria anisan`ny olana napetraka teto Madagasikara nandritra ny fifidianana filoham-pirenena ny lisi-pifidianana. Hisy kosa ny fiaraha-miasa akaiky eo amin`ny CENI sy ny fokontany ary ny kaomnina amin`ny fanesorana ireo olona efa maty ao anatin`ny lisi-pifidianana.